“Messi ma ahan bini’aadam caadi ah… I rumaysta!” – Xiddig hore ee kooxda Barcelona ah – Gool FM
“Messi ma ahan bini’aadam caadi ah… I rumaysta!” – Xiddig hore ee kooxda Barcelona ah
(Barcelona) 05 Sebt 2019. Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wadahadalo dheer la yeeshay xiddigga khadka dhexe ee reer France iyo kooxda Monaco ee Cesc Fàbregas, kaasoo ka hadlay waxyaabo badan.
Xiddigii hore kooxaha Barcelona iyo Chelsea ayaa amaan ugu qubeeyay kabtanka Blaugrana ee Lionel Messi oo ay horey saaxiibo ku soo noqdeen garoonka Camp Nou, isla markaana uu xiriir wanaagsan kala dhexeeyay gudaha garoonka iyo banaankiisa intaba.
32 jirkan reer Spain ayaa ka dhaqaaqay kooxda Barcelona xagaagii 2014, si uu ugu biiro naadiga Chelsea oo uu ku sugnaa ilaa iyo bishii janaayo 2019, kaddib wuxuu ku biiray safka kooxda reer France ee Monaco.
Laacibkii hore ee kooxda Arsenal ayaa la weydiiyay inta lagu gudajirey wareysigan uu la yeeshay wargeyska “AS” ee dalka Spain, daddii ay jirto suurtogalnimo aan ku arki karno “Messi cusub” mustaqbalka wuxuuna ku jawaabay.
“Waxaan u maleynayaa inaysan taasi macquul aheyn, waxaan aragnay sida Ronaldo iyo Ronaldinho, ciyaartoy cajiib ah, laakiin Messi wuxuu ahaa kan ugu fiican muddo 15 sano ah”.
“Wuxuu ku jiraa xilli ciyaareedkiisii ​​17-aad, wuuna ka fiicnaa sidii uu ahaa marka uu jiray 18 sano, waxaan soo arkay waxyaabo aadan rumeysan karin!”.
“Saddexdii maalin kastaba, wuxuu dhalinayaa goolal, wuxuu u safrayaa Argantina si uu ugu soo ciyaaro, kaddib marka uu safarka ka soo laabto isagoo daalan wuxuu dhalinayaa seddexleey, tani caadi ma ahan… i aamin”.
Gary Neville oo hal arrin ka codsaday taageerayaasha kooxda Man United, isagoo xusay Jurgen Klopp